Yini ongayibona eMexico City | Izindaba Zokuhamba
Yini ongayibona eMexico City
UMariela Carril | 12/10/2021 17:00 | I-México, Yini ongayibona
La inhlokodolobha ye I-México yidolobha elidala, elinempilo, elinabantu abaningi, elijabulisayo, elinomlando, nelithakazelisayo. Azikho izichasiso zedolobha elibaluleke kakhulu ezweni, idolobha ongeke ukwazi ukushiya ngaphandle kokuvakashela okubaluleke kakhulu.
Namuhla, e-Actualidad Viajes, siyabandakanyeka ongakubona eMexico City. Ake sijabule!
1 I-Mexico City
2 Yini ongayibona eMexico City
Ngaphambi kokuba yaziwe ngokuthi EMexico DF, ngesifunda sikahulumeni. Yidolobha elibaluleke kunazo zonke ezweni nase inhliziyo yezepolitiki, yezezimali, yezenhlalo neyabavakashi. Usuku oluqondile lwesisekelo salo alwaziwa, noma kucatshangwa ukuthi kwakungonyaka we-1325, ngesandla sabantu mexica okwathi, yona yahlulwa futhi yabuswa abaseSpain.
IViceroyalty yaseNew Spain isukela ngo-1535. Ukuzimela kweMexico kwenzeka ngo-1821 kwathi ngabo-1824 idolobha laba yisifunda sikahulumeni, sehlukile kwezinye izifundazwe ezakha izwe, futhi laba yisihlalo samandla ombuso. Ngasekupheleni kweminyaka yama-80s yekhulu lama-XNUMX, kwaqala izinguquko esimweni sezepolitiki ngakho igama lavele laba lelo leMexico City.
Namuhla Nazi izindawo ezingama-35 lapho i-UNESCO imemezele ukuthi yiGugu Lomhlaba, iminyuziyamu engaphezu kwekhulu, Ngamanye amagama, yidolobha lesibili elineminyuziyamu eminingi emhlabeni ngemuva kweLondon, ngakho-ke ungacabanga ukuthi iyi i-mecca yezokuvakasha.
AbakwaZocalo yigama lesikwele esikhulu noma iPlaza de la Constitución, okuyi Isikwele esibaluleke kunazo zonke futhi singesinye esikhulu kunazo zonke emhlabeni. Eduze kwayo kuneziza eziningi ezibalulekile, ngokwesibonelo IMetropolitan Cathedral yaseMexico, yesitayela sebaroque eyalelwe ukuba yakhiwe nguHernán Cortés ngokwakhe ethempelini lama-Aztec. Ngaphakathi kukhona iCrypt of the Archbishops, uqweqwe lwaMakhosi, iRoyal Chapel nekhwaya enhle.
Esinye isakhiwo esizungeze iZócalo yi Isigodlo Sikazwelonke ngomdwebo odumile we-Diego Rivera ongadumile kangako. Kwelinye lama kona wesikwele yilokho okusele kwalokho okuthiwa IMeya yaseTemplo, inhliziyo yempucuko yasendulo yaseMexico kanye inhlokodolobha endala, iTenochtitlán. Ukoloniyali waseSpain wazama ukuqeda yonke inkumbulo lapho kwakhiwa idolobha, kepha phakathi nekhulu lama-XNUMX ukuvubukulwa okuhlukahlukene kwemivubukulo kwakwembula lokho kudlula okukhulu.
Uzobona izinsalela zepiramidi nezinye izakhiwo nokuthi yini eyatholakala isemnyuziyamu ngaphakathi kwesakhiwo, isibonelo ukukhululeka kwamatshe kukankulunkulukazi uCoyolxauhqui, i-sphinx kankulunkulu womlilo kanye nesikhumbuzo esihle seTlatecuhtli.
Futhi, kwelinye ikona le-Zócalo yi Ingosi endala yeMercaderes, iqembu lamabhilidi ezentengiselwano aqhamuka ngekhulu le-XNUMX, namuhla aguqulwe aba amahhotela nezitolo zikanokusho. Indawo enhle yokubuka indawo enhle ithala leHotel Majestic noma umbono weGran Hotel.
Futhi ngaphakathi kwesikhungo somlando sedolobha ungavakashela i- IKolishi laseSan Ildefonso, isikhungo semfundo esidala esidume kakhulu, esinamakilasi abo adlula abalingiswa abanjengoFrida Khalo noDiego Rivera. Eqinisweni, lo mbhangqwana wahlangana lapha.
Ukuhamba ngomgwaqo waseMadero wabahamba ngezinyawo usuka esigcawini ohlangabezana naso elinye lamabhilidi amade kakhulu edolobheni, okuthiwa yiTorre Latinoamericana. Umbono wayo uyisisekelo sangempela, kepha ngaphakathi kukhona umbukiso waphakade, kukhona Imyuziyamu yaseBicentennial, ibha esitezi sama-40 nendawo yokudlela esitezi sama-41. Ithala elivulekile lisesitezi sama-44.
Uma uthanda ubuciko kuzofanela uvakashele Isigodlo sobuciko obuhle eseduze neTorre Latino. Lesi sakhiwo sisukela ekuqaleni kwawo-1900, sisesitayeleni se-Art-Nouveau, yize ingaphakathi laso kuyi-Art-Deco. Yenziwe ngemabula emhlophe futhi ngaphakathi kunemisebenzi kaSiqueiros, Diego Rivera noma uRufino Tamayo. Ngaphezu kwalokho, kuyasebenza futhi ngaphakathi kwe- Museum of Architecture nendawo yemidlalo yeshashalazi lapho ungathamela khona umbukiso odumile onamathiselwe kakhulu izivakashi: the I-Folkloric Ballet yaseMexico.
Uma uthanda u-Diego Rivera nomsebenzi wakhe ungavakashela i- I-Diego Rivera Mural Museum osekugcineni kwe-Alameda Central, indlela yemithombo nemifino. Ngobuciko obengeziwe kukhona ifayela le- Imyuziyamu Kazwelonke, phambi kwePlaza Manuel Tolsá neqoqo layo lobuciko elibalulekile elisuka ngekhulu le-XNUMX kuye kwele-XNUMX.
Ukuvakashela idolobha njalo kusho ukuhamba, ukuhamba, ukuhamba. Lapha, ngaphezu kwesikhungo, ubuhle buyatholakala ku- izindawo ezihlukene. Enye yazo ICoyoacán, eningizimu yedolobha. Kuyinto Indawo yaseBohemia, indawo yabadwebi nezindlu zamakholoni, ezineminyuziyamu, izimakethe, izitolo zezincwadi, izitolo zekhofi. Yilapho i- IBlue House kaFirda Khalo kanye noMfula iDiegoa, namuhla umnyuziyamu, kepha kukhona i- ILeon Trotsky House Museum, lo IHernán Corté Houses, i-Centennial Garden noma iNdlu kaMasipala.
Ezinye izindawo ezinconyiwe nezinhle yiCondesa neRom. Kulapha lapho futhi ungabona okuhle kakhulu kwe- Ubuciko basemadolobheni baseMexico noma ubuciko basemgwaqweni. Ukuze ukwazise lokhu ungabhalisela i- ukuholwa kwebhayisikili okuqondisiwe lokho kukuhambisa emakhoneni ahlukahlukene wedolobha.
Ukuhamba, ngokuqinisekile uzofinyelela kufayela le- Indawo yamasiko amathathu, isiko laseSpain, ngoba kukhona isifunda samakholoni kanye nesigodlo, isiko laseTenochtitlán namanxiwa alo kanye nemipiramidi kanye nesiko lanamuhla laseMexico ne-University Cultural Center. Akuvamile ukubona konke endaweni eyodwa, kodwa kuhle ngokubuka kwezivakashi.
Uma ungumKatolika futhi uthanda abangcwele, iMexico iyafana neVirgin yaseGuadalupe bese uvakashela i- Isonto laseGuadalupe kuyisibopho. IVirgin yaseGuadalupe ingusanta ongumvikeli wedolobha, izwe kanye neLatin America. Yaqedwa ngo-1709, yize ingxenye entsha yaqala ngo-1976. Abantu abayizigidi ezingama-20 bayivakashela ngonyaka.
Uma uthanda ukubona isiko nokuyothenga, kuzofanela usebenzise ngokunenzuzo izimakethe futhi ngalokhu eyodwa okunconywe kakhulu yi Imakethe yaseSan Juan. Le ndawo isenkabeni yedolobha futhi inekhulu nesigamu sempilo. Kukhona konke kusuka kumikhiqizo yokudla ejwayelekile futhi engajwayelekile, kufaka phakathi izinambuzane, kuya kumikhiqizo yobisi kanye ne-deli.
IMexico nayo iyafana nenguquko, ukuze wazi ukunyakaza kwenkululeko yaseMexico kufanele uye ku Isikhumbuzo seRevolution, isakhiwo esikhulu futhi esihlaba umxhwele ngaphakathi kwePlaza de la República. Imayelana ne- mausoleum anikezelwe kumaqhawe aseMexico, IPancho Villa phakathi kwabo. Kukhona futhi i- Museum of the Revolution, umbono ophakathi nendawo ofinyelela cishe emamitheni angama-66, ezinyaweni zawo izinsika ezinezinombolo ze-wax, nalokho okubizwa ngokuthi yiPaseo Linternilla ngezindlu zakhona.
Futhi okuhlobene nokuzimela kungaphakathi kwePaseo de la Reforma, i- Ingelosi Yokuzimela, uphawu lukazwelonkel. Kusuka ku-1910, unyaka wenkululeko kazwelonke, futhi kunonkulunkulukazi wamaGrikhi wokunqoba ngethusi ngegolide. Le ndlela ibaluleke kakhulu edolobheni, enamakhilomitha ayi-15s, kuthinta izindawo eziningi ezibalulekile ohambweni lwayo.
Ebusuku, ku- Umthombo wekhulu leminyaka ePlaza de la República, i umbukiso okhanyayo nomculo. Futhi uma ukhuluma ngobusuku, lapho ilanga lishona indawo enhle indawo obizwa ngayo i-pink Zone eliseColonia Juarez.
Hay amahhotela, imigoqo, izindawo zokudlela, ama-nightclub nezivakashi eziningi, ngoba kumayelana nokuzijabulisa. nayi i- indawo yezitabane Futhi futhi ungasuka lapha uye endaweni yase-Roma Forte udabula i- Glorieta de los Abavukeli, omunye wabahamba ngezinyawo abahamba phambili edolobheni.
Okokugcina, ezinye izindawo ongeke uzikhumbule kuhlu lwanamuhla lwezinto ozozibona eMexico City: the Inqaba yenkosi, indawo eyayihlala uMbusi uMaximilian ngo-1864, nefenisha nokuhlobisa ngaleso sikhathi, UMuseo Nacional de Historia (ngaphakathi nangohambo oluqondisiwe uma ufuna), i- Ihlathi leChapultepec Amahektha angama-500, makhulu, aneminyuziyamu, amachibi nezindawo zokudlela, okukhulu futhi okubalulekile UMnyuziyamu Kazwelonke We-Anthropology waseMexico (Yilapho itshe leLanga likhona, isigqoko sekhanda likaMoctezuma, isithombe sethuna leNkosi Pakal, ongowokuzalwa ePalanque nomaskhi wakhe wejade, noma iGumbi leMayan.
Okokuphuma okuhle nenhle kukhona Indawo yasePolanco, ikhaya lamanxusa amaningi, ngoba uhamba ezindaweni ezinokuthula yiSan Ángel neChimalistac, i- Imisele yeXochimilco, ukuhamba umabhebhana ezimibalabala futhi ubone imakethe noma iDolores Olmedo Museum neqoqo layo elikhulu lemisebenzi kaRivera, kanti-ke indawo yemivubukulo yaseTeotihuacán ngamaphiramidi alo elanga nenyanga, inqaba, inkundla yabafileyo nabanye. Ifinyelelwa ngebhasi.
Vele, lolu hlu esizikhuthaze ukuthi silwenze luyisibonelo nje salokho iMexico City enhle futhi enkulu kakhulu enganikeza izivakashi zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » América » I-México » Yini ongayibona eMexico City